शहरभरी बैंक, बाँकेका गाउँमा पुगेन बित्तिय साक्षरता (हेर्नुहोस् बाँकेमा बैंकको संख्या) - Nepalgunj Business
शहरभरी बैंक, बाँकेका गाउँमा पुगेन बित्तिय साक्षरता (हेर्नुहोस् बाँकेमा बैंकको संख्या)
बाँके २९ जेठ : बाँकेमा हरेक वर्ष बैंक तथा बित्तिय संस्थाका शाखा खुल्ने क्रम बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार, आ.व २०७४र०७५ सम्म बाँकेमा बैंक तथा बित्तिय संस्थाको शाखा १ सय ६२ पुगेको छ । जतिसुकै शाखा खुले पनि ती नेपालगन्ज, कोहलपुर जस्ता शहरमा केन्द्रीत छन् ।
स्थानीय तहको गठनसंगै खजुरा लगायतका ग्रामिणक्षेत्रमा बैंक तथा बित्तिय संस्था पुग्न खोजे पनि त्यो पर्याप्त छैन । सर्वसाधारणमा बित्तिय साक्षरताको त निकै अभाव छ । ग्रामिणक्षेत्रमा बैंकप्रति अविश्वास छ भन्ने सुन्दा त झन् यसक्षेत्रमा काम गर्ने सरोकारवाला निकायलाई उदेक लाग्न सक्छ । बाँकेको अति बिकट नरैनापुर जस्ता ठाउँको पुगेको सनराइज बैंकका प्रबन्धक खडकप्रसाद देवकोटाले यस्तै अनुभव सुनाए । उनले भने,–‘बित्तिय साक्षरताको कुरा छाड्नुहोस् यहाँ त सुरुमा बैंकप्रति अविश्वास थियो ।’
बाँकेको नरैनापुरमा सन्चालनमा आएको सनराइज बैंकको शाखामा आएका सेवाग्राही ।
संकटकालका समयमा गाउँबाट बैंकहरु बिस्तापित भएपछि अहिले पनि सर्वसाधारणहरुले बैंक गाउँ छाडेर जान्छकी भनेर प्रश्न गर्ने गरेका छन् । देवकोटा भन्छन्,–‘बित्तिय साक्षरताका बिषयमा जतिसक्यो जानकारी गराएका छौं ।’ बैंकका काम अति नै संवेदशिल हुन्छन् । सामान्य हस्ताक्षर नमिल्दा समेत काम हुँदैन । ‘बैंकको काम यस्तो हुन्छ तर गाउँमा एकचालिस लेख्नुपर्ने ठाउँमा एकतालिस लेख्ने पनि छन् । हामीले सिकाउन बाँकी छ ।’– देवकोटाले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकले बित्तिय साक्षरताका लागि अभियान सुरु नगरेको होइन । राष्ट्र बैंक स्वयं र निजीस्तरका बैंक आफैले यस्ता कार्यक्रमहरु सन्चालन गरेका छन् । तर तथा बित्तिय संस्थाहरु शहर केन्द्रीत भएका कारण बित्तिय साक्षरता अभियान गाउँमा पुग्न सकेका छैनन् ।
बैंकमा सन्चालनमा रहेका बैंक तथा बित्तिय संस्थाको संख्या
कर्णाली विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेश रावतले ग्रामिणक्षेत्रमा बित्रिय साक्षरता चलाउन आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्,‘यही कुराको आवश्यकता महसुस गरी हामीले ग्रामिणक्षेत्रमा शाखा बिस्तार गर्ने र बित्तिय साक्षरता गाउँमा पुर्याउने लक्ष्य राखेका छौं ।’स्थानीय तह गठनपछि ग्रामिणक्षेत्रमा बैंक खुल्न नभई नहुने बिजुली, इन्टरनेट, सडक जस्ता पूर्वाधार बन्न थालेपछि अहिले राष्ट्रियस्तरका बैंकहरु गाउँ जान थालेका छन् । गाउँमा बैंक पुगेसंगै बित्तिय साक्षरता बढ्ने बिश्वास गरिएको छ ।
के हो वित्तीय साक्षरता ? किन छ यसको महत्व ?
प्रकाशित मितिः बुधबार, जेष्ठ २९, २०७६ 11:13:33 AM